Ukufudumala kwembulunga yonke kungaholela ekwandeni kwamagciwane eYurophu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukufudumala kwembulunga yonke kungaholela ekwandeni kwamagciwane eYurophu
Umzimba womuntu kusuka emvelaphi yawo kuye kwadingeka uzivumelanise futhi uziqinise ezindaweni ezahlukene, ezimeni ezahlukahlukene, kepha abantu baseYurophu bangakwenza yini ukufudumala kwembulunga yonke? Amagciwaneokungukuthi amagciwane, amabhaktheriya, isikhunta nezinye izinto ezincane, kungakhuphula ubukhona babo eminyakeni ezayo eZwekazini Elidala.
Lokhu kuvezwa wucwaningo olushicilelwe kwi-Scintific Reports, olwaluholwa ngusosayensi uMarie McIntyre, wase-University of Liverpool. Liyini ikusasa lethu?
Indawo ngayinye, indawo ngayinye ithambekele ekubeni nezifo ezithile, kepha njengoba izinga lokushisa eliphakathi nendawo lenyuka, ama-pathogen ajwayele ukwenza amakoloni ezifundeni ezazibanda kakhulu kuwo, njengoba kwenzeka ngokwesibonelo umiyane wehlosi eSpain eminyakeni eyishumi edlule. Lesi sinambuzane siyimbangela yezifo ezifana ne-chikungunya fever, udenga noma i-yellow fever, izinkinga izwe ebengenazo kuze kube yiminyaka embalwa edlule. Kepha akuyona ukuphela kwento okudingeka sikhathazeke ngayo.
Abaphenyi, ngemuva kokubukeza amadokhumende ashicilelwe kuma-pathogen wabantu ayikhulu nakwabanye abakhona ezilwaneni ezifuywayo ezikhona eYurophu, baphetha ngokuthi izifo ezisatshalaliswa yizinambuzane nemikhaza yizona ezizwela kakhulu esimweni sezulu.
Njengoba uMcIntyre echaza, “nakuba kunokuhlobana okuhle okukhona phakathi kokuguquka kwesimo sezulu nezifo ezithathelwanayo, phambilini besingaqondi ukuthi imiphumela ingaba mikhulu kangakanani nokuthi yiziphi izifo ezizothinteka kakhulu. Ukuzwela kwesimo sezulu kwamagciwane kuyinkomba ebalulekile yokuthi izifo zingaphendula ekushintsheni kwesimo sezulu, ngakho-ke Ukuhlola ukuthi yimaphi amagciwane azwela kakhulu esimweni sezulu kanye nezici zawo kungulwazi olubalulekile uma sifuna ukulungiselela ikusasa".
Ngakho-ke, ikusasa eYurophu lingaba nzima kakhulu.
Uma ufuna ukufunda isifundo, chofoza lapha.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izibikezelo » Ukufudumala kwembulunga yonke kungaholela ekwandeni kwamagciwane eYurophu
Ngo-Agasti 21 kuzoba neTotal Solar Eclipse, sizokutshela ukuthi uyibona kanjani ngesikhathi sangempela!
ISpain isengozini yokuba ihlane ngasekupheleni kwekhulu leminyaka